Kutheni Kufuneka Ndithandaze? | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Ngokutsho kolunye uhlolisiso, i-80 pesenti yolutsha olufikisayo lwaseMerika luyathandaza, kodwa sisiqingatha salo esithandaza yonke imihla. Ngokuqinisekileyo, olunye ulutsha luyazibuza: ‘Ngaba ukuthandaza yindlela nje yokuzenza uzive bhetele okanye kukho into engaphaya koko?’
Ngaba uThixo uyayimamela imithandazo?
Zintoni izinto endinokuzithandazela?
Okuthethwa lolunye ulutsha
Umthandazo kukuthetha noMdali wazo zonke izinto. Khawucinge ngoko kuthethwa koku! UYehova mkhulu kunabantu ngandlela zonke, kodwa ‘akakude kuye ngamnye wethu.’ (IZenzo 17:27) Phofu iBhayibhile inesi simemo: “Sondelani kuThixo, naye uya kusondela kuni.”​—Yakobi 4:8.
Ungasondela njani kuThixo?
Enye indlela kukuthandaza​—ngaloo ndlela uthetha noThixo.
Enye indlela kukufunda iBhayibhile​—ngaloo ndlela uThixo uthetha nawe.
Ukuncokola ngaloo ndlela​—ngomthandazo nokufunda iBhayibhile​—loo nto iya kukunceda uqinise ubuhlobo bakho noThixo.
“Ukuthetha noYehova​—ukuncokola Noyena Thixo Uphakamileyo​—lelona lungelo abantu banokuba nalo.”​—UJeremy.
“Ukuncokola noYehova ngeemvakalelo zam ngomthandazo kundenza ndizive ndisondele kuye.”​—UMiranda.
Enoba uyakholelwa kuThixo​—enoba uyathandaza kuye​—kusenokuba nzima ukuyikholelwa into yokuba uyayimamela. Kodwa ke, iBhayibhile ithi, uYehova ‘ngumphulaphuli wemithandazo.’ (INdumiso 65:2) Ide ithi, “liphoseni kuye lonke ixhala lenu.” Ngoba? “Kuba unikhathalele.”​—1 Petros 5:7.
Khawucinge ngoku: Ngaba uhlala uchitha ixesha uncokola nabahlobo bakho? Ungenza njalo nakuThixo. Thandaza kuye yonke imihla, usebenzise igama lakhe, uYehova. (INdumiso 86:​5-7; 88:9) Ewe kona, iBhayibhile ithi, “thandazani ngokungapheziyo.”​—1 Tesalonika 5:17.
“Umthandazo yincoko ephakathi kwam noTata osezulwini, endikhuphela kuye imbilini yam.”​—UMoises.
“Ndincokola noYehova ngazo zonke izinto njengokuba bendiya kwenza njalo kumama okanye kumhlobo osondeleyo.”​—UKaren.
IBhayibhile ithi; “Ezintweni zonke zaziseni izibongozo zenu kuThixo ngomthandazo nesikhungo nombulelo”​—Filipi 4:6.
Ngaba loo nto ithetha ukuba kulungile ukuthandaza ngeengxaki zakho? Kunjalo! Kangangokuba iBhayibhile ithi: “Umthwalo wakho wulahlele kuYehova, yaye yena wokuxhasa”​—INdumiso 55:22.
Kakade ke, xa uthandaza kuThixo, umele uthethe nangezinye izinto kunokusoloko uthetha ngeengxaki zakho. UChantelle intombazana eselula ithi: “Andinakuba ngumhlobo olungileyo ukuba ndicela uncedo kuphela kuYehova. Ndicinga ukuba ndimele ndibulele kuqala, yaye zininzi izinto endimele ndibulele ngazo.”
Khawucinge ngoku: Ziintoni izinto onokumbulela ngazo uYehova? Ziziphi izinto ezintathu onokumbulela ngazo uYehova namhlanje?
“Nento encinci njengobuhle bentyatyambo, isenokusenza sifune ukumbulela uYehova.”​—UAnita.
“Cingisisa ngento oyithandayo kwindalo okanye ivesi yeBhayibhile ekuchukumisayo uze umbulele uYehova ngayo.”​—UBrian.
“Ubunzulu bemithandazo yethu bumele bufane nobunzulu bolwandle, kungekhona obomgxobhozo. UYehova ufuna ukusinceda, nangona esazi oko sikufunayo singekamceli, singambonisa indlela esimthembe ngayo ngobunzulu bemithandazo yethu.”​—UMoises.
“Umthandazo ufana nentambo uYehova ayibambileyo ngoxa mna ndibambe kwelinye icala. Xa ndithandaza ngoko kusentliziyweni yam, kuba ngathi ndiyayitsala le ntambo noYehova uyayitsala ngalo ndlela uyandiphendula, oko kwenza ubuhlobo bethu buqine.”​—UMiranda.
“Ukuba asilumkanga, imithandazo yethu isenokuba luludwe nje lwezinto esizinqwenelayo. Kodwa xa simbulela uYehova, siye sizixabise izinto ezininzi asinike zona ibe sithandazela izinto ezibalulekileyo kunokuba sithandazele iziqu zethu.”​—UJeremy.
“Xa sisoloko simbulela uYehova, siye sibe noxabiso ngakumbi. Ukubulela uYehova ngomthandazo kusinceda sizixabise iintsikelelo esizifumanayo kunokusoloko sicinga ngeengxaki zethu.”​—UShelby.
Indlela Yokuphucula Imithandazo Yakho
UThixo unokuyiphendula imithandazo engakhange enze mimangaliso.